Donald opi, billionaire, politik, President, usa
Donald John opi(* 14 June 1946 New York) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị American Republican na 45. President nke United States nke America, bụ onye ghọrọ 20. January 2017. O sonyeere White House n'oge ọ bụ 70 dịka onye kachasị aka na onye kasị baa ọgaranyama ghọọkwa nwoke mbụ na-arụ ọrụ na-enweghị ahụmahụ ọhụụ nke ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị agha.
Nkọwa maka nnọchiteanya ntuli aka USNNNX maka Republican Party kwupụtara n'ụzọ doro anya 2016. June 16, na mgbe o meriri primaries, a họpụtara ya maka President nke US na Cleveland Congress na July. Na nhoputa nke 2015. 8 emeriwo ndị votu votu 2016 (ma e jiri ya tụnyere nọmba chọrọ nke 306), merie onye isi ya, onye ọchịchị Democratic Hillary Clinton, maka ndị votu votu 270.
Tupu ịbanye n'ọfịs ahụ, ọ na-eje ozi dị ka onyeisi oche na onye isi oche nke The Trump Organisation, na-emeso azụmahịa ụlọ ahịa. Ọ na-agba ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa casinos na goofu n'ụwa niile. Ekele maka ihe ngosi giThe amụ ọrụ n'aka ya(ya bụamụ ọrụ) na NBC ghọrọ enyi mgbasa ozi.
N'abalị mbụ nke ụda ya, Trump tụgharịrị ụfọdụ n'ime ụzọ ndị mbụ ya bụ Barack Obama. Ọ si na Transpacific Partnership Agreement na site na Agreement Paris na mgbanwe ihu igwe. O mekwara ka mmechi mmekọrịta nke US-Cuban kwụsị. Ebube onyeisi oche bụ Neil Gorsuch dị ka onye nke itoolu nke Ụlọikpe Kasị Elu. Mgbe Nkwekọrịta nke United States kwadoro ya, e weghachitere 5 na nchekwa 4 na ndị XNUMX. Ụda ahụ guzosie ikenjem mgbochi, bụ nke ọnwa atọ gbochiri ụmụ amaala si mba isii ndị Alakụba ịbanye n'ókèala United States, bụ nke ghọworo isiokwu nke ọtụtụ ịgba akwụkwọ. Mgbalị na-eme ịkwụsị ma ọ bụ belata usoro ihe omume nke nlekọta ahụ ike dị ukwuu maka ụmụ amaala dara ogbenye (na-Obamacare) achọpụtawo ọtụtụ nnupụisi ma adabala na nke a n'ihi àgwà dị iche iche nke ọtụtụ ndị omekome Republican.
Na May, 2017 kpochapụrụ ụda sitere n'aka onyeisi ụlọ ọrụ FBI, James Comey. Obere oge mgbe Justice Department họpụtara a pụrụ iche ikpe Robert Mueller ichoputa ihe ahụ e boro Russian nnyonye anya na president ntuli aka na 2016 na o kwere omume mmekọahụ n'etiti Russia na rụkọrọ ọrụ opi nke president mkpọsa.
Ndị ikwu na ndị ikwu
A mụrụ ya na Queens, New York, dị ka anọ nke ụmụ ise. Nne na nna ya Frederic C. opi (11. 1905 October, New York - 25. 1999 June) na Mary A. Macleod (10. 1912 May, Scotland - 7. 2000 August). Nna ya ghọrọ nnukwu onye na-ewu ụlọ na New York City. Ezigbo nne na nna Donald Trump bụ ndị Germany kwabatara na-akwaga na United States na 1885. Nna nna Frederic opi (opi Friedrich mbụ aha) A mụrụ a obere wine obodo Kallstadt na ebe, nke bụ nke ndị German obodo nke Rhineland-Palatinate. Aha mama m bụ Elisabeth Pink. Kraịst. Nna nna nna enwetawo ezigbo akụ na ụba dịka onye nwe ụlọ ọbịa, n'etiti ndị ọzọ, na Seattle, Washington.
Ọkụ na-eto eto na-amụ na Kew-Forest School na Forest Hills, New York City, Queens. N'ihi nsogbu na ọmụmụ ihe ya, ndị nne na nna ya zigara New York Military Academy mgbe ọ dị afọ iri na atọ. N'ebe ahụ, ọ gụrụ akwụkwọ agụmakwụkwọ ma na-egwuri egwu n'egwuregwu football na egwuregwu basketball. Site na nchịkọta basketball ọ nwetara onyinye 1964Onyinye onye nlekọta. O mechara mụọ akwụkwọ maka afọ abụọ na University nke Fordham, wee kwaga na Wharton School nke dị na Mahadum Pennsylvania. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ Bachelor na Economics na Finance, o sonyeere 1968 na Òtù Ụda Nna ya.
Na 1977, Donald Trump lụrụ di na nwunye Czech model Ivana Zelníčková. A mụrụ ụmụ atọ n'alụmdi na nwunye: Donald Jr., Ivanka na Eric Trump.Nwa mbu nke ụmụaka a, Donald Jr., na-ekwu okwu nke ọma na Czech n'ihi na ya na ndị nne na nna ochie nwere mmekọrịta chiri anya site na nne nne ya mgbe ọ bụ nwata. Ebe ọ bụ na 1980 na-ejikarị oge ezumike ezumike na Zlín eme ihe.
Kemgbe April 1978, Czechoslovak State Security anọwo na-emechi nwunye Trump, Ivan. N'oge ahụ, ọ bịakwara nweta ihe ọmụma banyere itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị America. Tinyere ihe ndị ọzọ, a gwara ya banyere ntụrụndụ na-agba ọsọ maka onyeisi oche nke United States na 1988 na 1996 n'otu n'otu.
Donald gbawara na Czechoslovakia na 1990, mgbe ọ gara n'ili nke nna nwunye ya Miloš Zelníček na Zlín.Awara Donald na Ivan gbara alụkwaghịm na 1992. N'afọ sochirinụ, Marump Maples lụrụ di na nwunye, bụ onye Tiffany mụrụ.Ha alụkwaghịm soro na 1999. Mgbe afọ isii gasịrị, opi nwunye a atọ, na Slovenian nlereanya na mmebe Melanie Knavsovou onye muru nwa Barron William opi.
Ịmalite ọrụ azụmahịa
Ụda malitere ọrụ ego na ụlọ nna ya (Òtù Ụda). Iji malite ọrụ nke ya, nna ya nyere ya ego nke otu nde dollar.Otu n'ime ọrụ mbụ ya bụ mmaliteghachi nke obodo ndị Swifton Village na Cincinnati, Ohio. Mgbe obodo nta Swifton nyefeere nna ya, 6 nwetara ọtụtụ nde dollar US.
Na 1980 na New York, ọrụ malitere na iweghachi Ọdụ egwu Wollman na Central Park. Ihe oru ngo a nwere atụmatụ atumatu na 21. Otú ọ dị, 1986 adịghịdị nso nso ma 12 etinyeworị ọtụtụ nde dollar. A na-enye ụda iji weghara ọrụ ndị a n'emeghi obodo ahụ iji kwụọ ụgwọ ọ bụla. A jụrụ akwụkwọ ahụ ruo mgbe ndị mgbasa ozi bịara. N'ikpeazụ, ọ nwetara ohere ahụ ma oru ahụ mejupụtara 1,95 nde dollar n'ime ọnwa atọ, nke bụ ihe dịka 750 000 dollar karịa ego mbụ.
Ka ọ na-erule njedebe nke iri asatọ ahụ, ọ banyela nsogbu ego. Owuwu nke ulo ato nke ato ya, Trump Taj Mahal na Atlantic City (New Jersey), n'enye otutu ego ugwo onu ahia, nke o nweghi ike ịkwụghachi. Ndị na-emepụta ego na ndị na-ejide ego ejirila ọtụtụ narị nde dollar. A ghaghị ibufe 50% nwe nke cha cha Taj Mahal na ihe ejiri ejiri ya iji belata ibu ọrụ na-ewe oge iji kwụọ ụgwọ ahụ. Site na 1994, o jisiri ike belata 900 nde ụgwọ nke onwe ya ma budata ya nke 3,5 ijeri ụgwọ. Na 1995, ọ sonyere ya na casino na Trump Hotels & Casino Resorts.
Ihe ịga nke ọma na ọdịda
Ụda bụ onyeisi oche na onye isi oche (Onye isi oche, CEO nke ụda olu, nke na-emekọ banyere azụmahịa ụlọ ahịa. Ụda bụkwa onye guzobere Ọdụm ntụrụndụ Trump, nke na-agba ọtụtụ casinos na hotels gburugburu ụwa. Na October 2016 bụ magazin 499 bụ Donald Trump's Forbes. onye kacha baa ọgaranya n'ụwa.
N'ime afọ 1991, 1992, 2004 na 2009 kwupụtara ụkọ ego. Ego abụọ mbụ nwere akụ na ụba metụtara ụlọ ya: Trump Taj Mahal na Trump Plaza Hotel. Site n'oge ruo n'oge, ya onwe ya kwuru na mgbe ọ wuru ụlọ nkwari akụ ahụ ọ na-enyo enyo.Na 1994, ụgwọ onwe ya rutere 900 nde na 3,5 ahia ụgwọ na US $ ijeri. N'oge ahụ, ọ na-ere ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ya na ezigbo ala ma hapụ ọrụ ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enyere nkwado ego, site na ihe ndị ọzọ, nkwekọrịta bara uru maka ala ụlọ maka ohere nke igosipụta okwu "TRUMP" na ha. Bankrotes sitere na 2004 na 2009 nọ na ụlọ ya ọzọ, gụnyere Trump Taj Mahal na Trump Hotels & Casino Resorts.
Ọtụtụ nke ya ahịa oru nwere okpu ma ọ bụ na e kagburu - eg. Airlines opi, opi University, opi Magazine, opi vodka, opi steaks, opi Mortgage. Project opi University (2004-2011) n'afọ 2013 na March 2016 e nyere media mmasị, mgbe Attorney General Eric Schneiderman malitere nchoputa, nke biri na-eme ihe, na-ekwu na ụlọ akwụkwọ "aku kpọmkwem wayo, onye aghụghọ na iwu na-akwadoghị-eme."Ọ bụghị mahadum (a ghaghị ịgbanwe aha ahụ mgbe ọ gasịrị), kama ọ bụ usoro mmemme nke ịzụ ihe dị oké ọnụ na-eji uru efu maka ndị na-eso ha.
Ọzọ opi na oru ngo-enweta uru na - eg. Opi Financial (mortgage ụlọ ọrụ), opi Sales na leasing (residential ahịa), opi International Realty (residential na azụmahịa ezigbo ala na ụlọ), opi Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Go opi (online njem search engine), Họrọ Site opi (ọtụtụ kọfị ọṅụṅụ), opi ọṅụṅụ (ike ọṅụṅụ maka Israel na Palestian ahịa), Donald J. opi akara Mbinye aka Collection (akara nke ndị ikom si uwe na nche), opi Ice (bottled mmiri), opi Golf, opi Chocolate, opi Productions (TV mmepụta ụlọ ọrụ) ma ọ bụ Trump Home (ụlọ obibi).
Onyinye Donald nwere otutu Njirimara na United States:
ụlọ ọrụ na ụlọ obibi
Ụlọ elu Trump Tower (320 nde dollar skyscraper bụ otu n'ime ala ndị kasị baa uru na New York)
Ụlọ Elu Ụwa (New York Skyscraper Awarded on 290 Million Dollars)
40 Wall Street (Ụlọ Egwu, emere 1930 Trump ụlọ mbụ na 1996. Ụlọ ahụ bụ 283 m elu ma nwee 72 n'ala.)
Ụlọ Ahịa & Tower nke Las Vegas (Las Vegas)
Ụlọ Ahịa & Tower nke New York (New York)
Trump Taj Mahal (ụlọ poker nke ụlọ casino ahụ bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu na Atlantic City.
Na mgbakwunye na ụlọ ndị a na ụlọ ndị ọzọ dị na United States, Trump - eleghị anya ya na nwunye mbụ ya, Ivana Trumpová - nwekwara ụlọ obibi dị oke mma na Florida akpọ Mar-a-Lago. Maka isi ụlọ ọrụ a, ọ nwere ụda na 8. Septemba 2017 nyere iwu ka a kpọpụ ya, dị ka ọ dị, nakwa n'akụkụ ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nile nke Florida na Georgia, nke Oké Osimiri Hurma na-eyi egwu.
Ụda oku bụ ụlọ na-esonụ na-esote:
Ụlọ Elu na Tower nke Eluigwe (Toronto)
The Palm Trump International Hotel na Tower (Dubai)
Trump Ocean Club Hotel na Tower (Panama City)
Trump Ocean Club Baja Mexico (nke dị anya na San Diego)
A họpụtara Donald Trump ugboro abụọ maka Emmy Award ma rụọ ọrụ na cameo na ọtụtụ fim (Na 2 n'ụlọ: Agbafu na New York) na serials (Nne nwanyi anya,Nke a bụ oge).Ọ nọwo na ọbịa nke okwu dị iche iche na-egosi ọtụtụ oge. O gosikwara na mmemme ntụrụndụ ndị ọzọ, dị ka World Ngbagharị Ngwá Ọrụ, ebe ọ na-azụ Vince McMahon na onye nwe ụlọ.
Na 2003, ọ ghọrọ onye mmepụta ihe na onye nhazi ihe ngosi eziokwuThe amụ ọrụ n'aka yana NBC. Oge ọ bụla a na-agbasa asọmpi a, otu ìgwè na-alụ ọgụ maka ọrụ ahụ. Na usoro mbuThe amụ ọrụ n'aka yaOpi natara a ụgwọ 50 000 dollar kwa nwunye, ma mgbe ihe ịga nke ọma nke usoro ihe omume utịp 3 nde dollar kwa nwunye. Mgbe a na usoro nke 10 kwukwara atụ ogho-apụThe Celebrity Apprenticeebe ndị a rụrụ. Ego ha nwere ike ịhọrọ na gburugburu nke ọ bụla gara ọrụ ebere dịka onye nchịkwa ọrụ nke ndị otu mmeri ahụ họpụtara. Na 2007 makaThe amụ ọrụ n'aka yaỤda kpụrụ kpakpando na Hollywood Walk of Fame, nke e merụrụ ọtụtụ ugboro.
Gbaa ọsọ mgbe igosi ihe ngosiThe amụ ọrụ n'aka yaghọrọ onye na-emepụta ihe na ndị ọzọ ọrụ dị ka Miss USA na Miss Universe egwuregwu na-agbasa site na NBC telivishọn ọdụ.
Mgbe o kwusịrị ọkwa nchịkọta ntuli aka na nlekọta ọdịmma n'etiti ndị Republican, a na-ahụ ụda ahụ n'ụzọ na-enweghị atụ, dịka ọtụtụ ajụjụ ọnụ kwa ụbọchị. Ọ nwetara ọtụtụ ohere na oge na mgbasa ozi ọ bụghị nanị n'etiti Republican kama ọ bụ ndị ọchịagha niile. Media akụkọ na-metụtara Donald opi na okwu nke na-ege ntị nnọọ mma, na na mgbasa ozi na-chebere oge ewepụtara ya, nke o natara de facto free ohere maka ikwupụta echiche ya, nke o nwere ike inweta onwe ya ọtụtụ undecided Ntuli. Na ngụkọta, e kwuru na uru nke media ohere ya "free" nyere (dị ka megide mgbasa ozi nke ga-akwụ ụgwọ azụmahịa ọnụego) iri na 1,9-2,0 ijeri dollar.
Ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo January 2017
Tumadi na anụ ụlọ profiled ha chọrọ maka tax he ka ụlọ ọrụ, mfe tax usoro, na-ebelata gọọmenti etiti ụgwọ, nakwa dị ka ojuju nke àgwà anyị n'ebe iwu na-akwadoghị mbata na ọpụpụ.Iwu mba ọzọ megidere nkwekọrịta azụmahịa n'efu ma kwado echiche ahụ na United States anaghị egbochi ọtụtụ n'ime ụwa.
Ná ngwụsị nke okwu mbụ ya nke ọfịs, Barack Obama ghọrọ onye na-eme ebere,Oke, otu ndi mmadu choro ighota na amuru Obama na United States ma ya mere iru uzo ibu President nke United States (lee nsogbu nke Barack Obama). Dịka ọ dịkarịa ala na otu ihe ngosi telivishọn, Trump ekwupụtawo n'ihu ọha na ọ bụrụ na Obama nye akwụkwọ ndị achọrọ, 5 ga-enye nde nde dollar ọrụ ebere dị ka nlekọta nke President.Obama ekwetaghị ihe ịma aka a.
Nkuzi 2015 katọrọ onye isi US President Bush maka mwakpo nke Iraqọ si, banyere ihe ndị dị na Libya, Syria na Egypt, ndị mba ọzọ amụma nke Barack Obama na mbụ Secretary of State Hillary Clinton na Africa na Middle East kpatara ọnwụ "ọtụtụ narị puku".Tụkwasị na nke a, iwu a na-efu nnukwu ego nke nwere ike inyela maka nzube bara uru na United States, dị ka Trump.
Anyị nọrọ 4 puku ijeri dollar na mgbalị ịkwatu dị iche iche ndị mmadụ, na-eme ihe n'eziokwu, ma ọ bụrụ na e now bu, na anyị nwere ike ndị 4 puku ijeri na emefu na United States ịrụzi anyị ụzọ, àkwà mmiri, ọdụ ụgbọelu na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ na anyị nwere, anyị ga-abụ nke ka mma.
Na 2015 opi akpọ German chancelo Angela Merkel dị ka "eleghị anya kasị ukwuu ụwa ndú ugbu a," ma a afọ mgbe e mesịrị Angela Merkel sharply katọrọ maka ya anabata mbata na ọpụpụ iwu n'ime European Mbugharị nsogbu.
Ụda nwere àgwà ziri ezi n'ebe Israel nọ ma kwuo na ọ ga-amata Jerusalem dị ka isi obodo Israel.Na China, ụda nwere mmekọrịta na-adịghị mma. China akatọla iwu ahia ya, nke, dị ka o si ele ya anya, bibie United States ma kwadebe ndị America maka ọrụ ma na-eyi egwu ịmebata ọrụ dị elu nke mbubata na ngwaahịa ndị China.
Na okwu nke 2015 kwupụtara ọkwa ya maka onyeisi oche US na June, o kwuru na dị ka onyeisi oche ọ ga-ewu nnukwu mgbidi na ókèala Mexico na ndị Mexico ga-akwụ ya:
Mgbe Mexico zigara anyị ndị anyị, ọ naghị eziga kacha mma. Ha agaghị eziga gị ma ọ bụ gị. Ha zigara ndị nwere nsogbu dị ukwuu ma wute anyị nsogbu ndị a. Ha na-eweta ọgwụ ọjọọ, na-eme ndị omempụ, ha na-eme ihe ike. Ma ụfọdụ - echere m - bụ ezigbo mmadụ.
NBC Universal n'oge na-adịghị anya kwusara na, dabere na okwu ya maka ndị si mba ọzọ, nke na-ekwekọghị na nkwanye ùgwù ya na nkwanye ùgwù maka mmadụ niile, ọ na-eme ka ihe niile TV na-egosi na ya. Onye ọchụnta ego ahụ nụ na ọ na-eguzo n'azụ okwu ya wee dọọ ọdụ ahụ.Na USA, banyere 11 bụ ebe obibi ọtụtụ nde ndị si mba ọzọ na-akwadoghị, ma ọtụtụ n'ime ya si Mexico.
Mkpu na-ezube ịkwụsị nkwado ego niile site n'aka ego gọọmenti etiti na "obodo mgbaba" nke na-enye ebe obibi nke ndị si mba ọzọ na-ezighị ezi ma mebie iwu gọọmenti etiti. The na-akpọ "ebe nsọ obodo" adịkwaghị ukwuu n'ime Democrats, otu nke na-agụnye New York, Los Angeles, Miami ma ọ bụ San Francisco, n'obodo ebe mpaghara obodo anaghị akọ ndị Federal Immigration Office illegals na machibido ya ime ka obodo uwe ojii.A gwawo New York Mayor Bill de Blasio na ọ dị njikere ịga n'ụlọikpe iji chebe "obodo mgbaba" site n'aka gọọmentị etiti.
N'August, 2016 Trump kwuru na US ga-amata njikọ ndị Russia nke 2014 Crimea ma ọ bụrụ na ọ ga - eme ka mmekọrịta dị mma na Russian Federation.
Ndị nọ na Crimea, dị ka ihe m nụrụ si kwuo, ga-abụ na Russia karịa ebe ha nọ na mbụ. Anyị ga-echekwa nke a.
Vladimir Putin ekwuola na ọ dịkarịa ala na mkpọsa ntuli aka nke US nke afọ 2016, mana mgbasa ozi Russia banyere ụda ahụ edewo nke ọma n'oge a. Pump kwukwara na Putin bụ "onye ndu siri ike" onye ọ "na-eche na ọ dị mma", ma mgbe ya na ABC gbara ya ajụjụ, o kwuru na ya enweghị mmekọrịta na Putin ma ọ hụghị ya.Ọ kwadoro ịwakpo Russia megide ndị na-enupụ isi na Alakụba State (IS) na Syriama gosipụta njikere iji kwado Russia na agha megide IS.
Mgbe ochichi nke onye isi okwu nchebe na-agba oge na President Trump, onye bụbu Lieutenant General Michael Flynn, bụ onye kwadoro inwe mmekọrịta dị mma na Russia, onye ikwu White House Sean Spicer 14. Febụwarị 2017 kwuru na onyeisi ndị isi na-ewere Crimea dịka akụkụ nke Ukraine ma na-atụ anya na Russia ga-alọghachi Ukraine. Spicer zoro aka na okwu onye nnọchiteanya US na United Nations Nikki Haley, onye kwupụtara na UN na agha ndị Russia ga-anọgide na-arụ ọrụ ruo mgbe Crimea laghachi Ukraine.
Ogbugbaala akọwawo onye isi ala Siria bụ Bashar al-Assad dịka "onye ọjọọ," ma ọ kwukwara, sị, "Enweghị m mmasị na onyeisi Siria bụ Bashar Asad, ma Asad na-egbu ndị agha Islam (IS). Russia gburu ndị agha IS na Iran gburu ndị agha IS. "
N'ajụjụ ọnụ ya na ndị mmadụ na-eme n'ọdịnihu, ụda gwara onye Senator John McCain banyere ọrụ agha ya, karịsịa n'oge Agha Vietnam: "Ọ bụghị dike. Ọ dị mma, ọ bụ dike n'ihi na ejidere ya. M na - ahọrọ ndị a na - ejideghi. "McCain ji ụgbọelu ya gbaghaa mgbe ọ na - awakpo Hanoi na Rolling Thunder ọrụ, mebiri ụkwụ ya, ndị agha Vietnam wee jide ya ma tụọ ya mkpọrọ ruo afọ ise. Okwu ngwugwu kpatara esemokwu banyere ma McCain bụ dike agha.
7. December 2015, ụbọchị ole na ole mgbe ndị na-eyi ọha egwu wakporo San Bernardino, Trump nyere otu nkwupụta nke malitere site na nke a:
Donald J. Trump na-akpọ maka nkwenye zuru ezu zuru ezu nke Muslim ịbanye United States ruo mgbe ndị nnọchianya nke mba anyị chọpụta ihe na-eme.
Mgbe a jụrụ banyere mmepe nke ihe ọ kpọmkwem pụtara, ọ sịrị na a ga-gbochie na-na-emetụta nanị radicals, ma ihe niile ndị na-azọrọ Islam, gụnyere ndị Alakụba na ndị chọrọ na-abịa ka United States dị ka ndị njem nleta, azụmahịa njem nakwa n'ihi Alakụba Mba Amerịka na-alọghachi na obodo, dịka ọmụmaatụ, site na ememme. Nkwupụta ụda olu a enwewo mmeghachi omume na-adịghị mma na mgbasaozi.Saudi Arabian Prince Valid bin Talal a na-akpọ ụda "Ume America". Ụda ahụ zara na onyeisi "chọrọ iji ego nna ya na-achịkwa iwu anyị," nakwa na ọ ga-akwụsị mgbe onyeisi oche nke United States gachara.Na June 2016 opi ịrọ arọ ya ọnọdụ na ọ ga na-enwe a nwa oge ban, nke ga-emetụta nanị ndị mmadụ na-abịa site na mba "ikpe nke iyi ọha egwu megide US ma ọ bụ ya jikọrọ aka," ma ọ bụ mba "egwu site iyi ọha egwu."
Edemede mba Saudi Arabia, isi ma nsogbu dị na United States na Middle East, ma gosipụta na ndị ndú nwere ike ijide onwe ha maka mwakpo ndị omempụ 11. September 2001.Ụda na-akpọ Saudi Arabia ịghọkwu ndị ọzọ na-alụ ọgụ megide islam esiteghi na alama kwụọ ụgwọ maka ụgwọ ndị agha US na mpaghara ya.Ọ bụ Hillary Clinton ka ọ chọrọClinton Foundationlaghachiri onyinye o nwetara site n'aka Saudi Arabia n'ihi na Saudi Arabia na-emeso ụmụ nwanyị dị ka ndị ohu na-egbu ndị nwoke nwere mmasị nwoke.
Na arụmụka anọ nke Republican na 2016 Trump, o kwuru na ọ ga-anakwere na ọ bụghị naanị ndị na-eyi ọha egwu ka ọ na-eme, kamakwa na ezinụlọ ha. O kwukwara na ndị na-eyi ọha egwu na-eji ezinụlọ ha "ọta ọta." N'arụmụka, ọ kpọrọ maka mgbawa siri ike na ala Alakụba, ma kwukwara na ọ ga-eme ihe niile iji belata ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ.N'ihi na ezubere iche ndị ọzọ so n'ezinụlọ nke-eyi ọha egwu na-e-akatọ ndị President Barack Obama na mmekọrita ya nyere iwu bọmbụ raids dị iche iche ihe eji unmanned ugbo elu.
9. August 2016 kwuru ụda na nzukọ CNN na-akwado Hillary Clinton:
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ onye ikpe gị (kachasị elu), (mgbe ahụ) ọ nweghị ihe i nwere ike ime banyere ya, ezigbo m. ... Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ maka ndị na-akwado mmezi nke abụọ - amaghị m.
Okwu ya nwere ike ịkọwa ya (n'ọnọdụ kachasị ya) dị ka ihe ngọpụ iji gbaa onye iro ya aka.Mgbe o meriri ntuli aka ndi ochichi, o kwusiri okwu ozo na okwu ya na 9. November 2016 jara Clinton mma maka "nsogbu siri ike".
Mgbasa ozi ndi isi
Ụda amalitela itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na 20 kemgbe afọ iri asaa. otu narị afọ, na-akwado nzukọ nhoputa ndi nlekota nhazi na nke ego. Ná ngwụsị afọ ndị 1980, ndị Republican bụ nke mbụ a gwara ha ka ha guzoro. Dịka onye nwere ike ịchọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Mikhail Gorbachev, bụ onye nwere mmasị ịga nzukọ 1988 na New York City, nwere ike ịhụ ya. Ụgha mesịrị jụ inye ndị Republican. N'otu oge ahụ, ọ malitere iche echiche banyere onwe ya maka afọ 1996, bụ nke ọ chọrọ ime n'oge ahụ ndị Republican na ndị Democrats ya.
Oprah Winfrey show na 1988 nwere ike ịbụ oge mbụ ọ jụrụ ma ọ na-eche banyere onye na-akwado maka president nke United States. Ụda kwuru, "ma eleghị anya," ma ọchịchịghị nke a. O sonyeere ọgụ maka nhoputa ndi nhoputa ndi ochichi di na 2000. Ọ gara Mayor nke US reformform Party ma merie na steeti abụọ, wee hapụ na candidacy. Na 2014, o kwuru na ya "na-echebara echiche" banyere nhọpụta ọzọ.
Na 16. June 2015 kwupụtara ọkwa ya maka ntuli aka ntuli aka na 2016 maka Republican Party. Mgbe ahụ, ọ na-ebu ụzọ kwuo okwu nchịkọta ya "Mee America Great / Great!"(n'asụsụ Bekee mbụ"Mee America Ukwu Ọzọ").na "America First" ("America mbụ"). Na mbụ arụmụka ndị mba ọzọ, ọ bụ naanị ya na-ekweghị nkwa na ọ bụrụ na o mezughị ya, ọ ga-akwado onye mmeri nke isi ma ghara ịgba ọsọ maka ndị ọzọ nwere onwe ha.
N'okwu nke aka ya, o megidere mwakpo US nke Iraq na 2003. N'oge a televised arụmụka nke Republican president na-aga ime na September 2015 ọ katọrọ mbụ US President George W. Bush na nwanne ya nwoke Jeb Bush, agha na Iraq.
Mgbe ọ na-akpọsa onyeisi oche ya, ọ sịrị na o nwere $ 8,7 maka ijeri ijeri dollar; Dị ka Forbes si kwuo, ihe onwunwe ya na-eme ka ọtụtụ nde ijeri 4,5.
Ọ ghọrọ ngwa ngwa na-eduzi Republican Party.K 3. May 2016 Trump meriri 28 Republican primaries na rallies (a na-akpọ "ulo oru) na mba na ókèala EU. Mgbe 3. May 2016 na-enwe mmeri na primaries Indian, na-ewepụ ndị isi abụọ - Texas Senator Ted Cruzna Ohio Gọvanọ John Kasich,ma ghọọ onye nchịkwa Republican a na-eche na ọ ga - ahọrọ maka nhoputa ndi ochichi nke 2016.
On nkezi, ise bụ isi na ntuli aka nwere opi na May 2016 mbụ obere ụzọ ya yiri ndorodoro na president ntuli aka, na Democratic Party ndoro-ndoro Hillary Clinton. Na weebụsaịtịEzigbo Okpukpe(RCP) ka agbadoro maka 0,2% na United States. Nnyocha ndị e mere na dara na ihu ọma nke opi (na a pasent oke) ndị dị ka ndị: Rasmussen Akụkọ - 5%, Fox News: 3%, ABC News / Washington Post - 2%, USC Dornsife / Los Angeles Times - 3%. Clinton rutere na ihu ọma nke ndị a nyocha: NBC News / Wall Street Journal - 2%, CBS News / New York Times - 6%.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke May 2016, Trump amaolarịrị ọnụ ọgụgụ dị mkpa maka nhoputa ya dị ka onye nnọchiteanya president nke Republican Party. Dị ka Associated Press si kwuo, ọnụ ọgụgụ nke ndị 1 238 bịara mgbaru ọsọ karịrị otu ụzọ site na otu votu. Ndị nnọchiteanya, dị ka Okpu Republic Republic President Repam Pam Pollard, ekwubeghị.
N'oge na-adịghị anya mgbe ị gụchara ntuli aka na referendum na ndị òtù UK na European Union, Trump bịarutere na 24. June 2016 ka Scotland. Ya helikopta rutere na golf golfTrump Turnburrydị nso na Turnberry nke dị n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke mba ahụ (Ayrshire County).Mgbe ekwupụtasịrị ihe si na referendum pụta, ụda kwuru na "ndị omeiwu nke Britain ewerewo mba ha", nke bụ mgbanwe nke okwu ya site na ọgụ mgbagwoju anya US. Dị ka magazin American Timelse si kwuo, votu ahụ na-enye aka na ya bụ ọkwa ọhụrụ na ụwa (ma ọ bụ n'ụwa nile) "agha na ndị ọkachamara". N'ihe dị iche, ọ bụkwa mmeri nke trumps na ụwa ọnụ ọgụgụ.
Na July 2016 opi mesoo preparations maka nzuko nke Republican Party na Cleveland na nkera nke abụọ nke ọnwa na nke e mesịrị chọpụta na ukara party nwa akwukwo maka president ntuli aka na November 2016. Okwu ndị na-akọwa nkọwa gbara aha abụọ nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị nwere ike ịghọ ndị na-amanye opi maka ọkwa onyeisi oche nke United States, onye òtù ọlụlụ. Ya bụ, ha bụ onye nchịkwa New Jersey Chris Christie na Gọvanọ Indiana Gọvanọ Mike Pence.Mgbe ahụ, ụda ahọrọ Mike Pence dị ka onye na-akwado ya.
Onye isi ochichi US choputara
Nkwadebe maka ịbị ọrụ
Donald Trump meriri nhoputa 8. November 2016 wee ghọọ 45. President nke United States of America. Ụlọ ọrụ ahụ weghaara 20. January 2017.
Na 11. Na November, ụda nke Onye Nlekọta Na-ahụ Maka Nchịkwa US, Mike Pence, họpụtara Onye Ndú Ọchịchị iji kwadebe ochichi ọhụrụ. The otu ga-anọgide na-arụ ọrụ Chris Christie, Gọvanọ nke New Jersey, Gen. Michael T. Flynn, bụbu ọkà okwu nke House of Representatives Newt Gingrich, dọkịta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Ben Carson, a mbụ New York Mayor Rudy Giuliani na Senator Jeff Sessions Alabama. Ndị otu so n'òtù ahụ bụ President nke Republican Party, Rein Priebus, onye nduzi mgbasa ozi nke Trump Stephen Bannon, na Peter Thiel, onye ọchụnta ego Germany nke na-etinye ego n'isi obodo Silicon Valley. Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump na ọgọ nwoke Jared Kushner ga-arụ ọrụ ọnụ.
Na 13. November 2016 aha ya bụ opi mbụ onyeisi oche nke Republican National Committee Reince Priebus ka mkpa na ọnọdụ dị ka nke ọzọ Chief nke ọrụ nke White House. Priebus na-ekewet ezi ihe nke ya opi bukwanu support na ntuli aka mgbasa ozi, nzukọ nkà na ya ná mma, n'ihi na ihe atụ, Ọkà Okwu nke House of Representatives Paul Ryan. Ọ na-mara ọkwa na Stephen Bannon, ugbu nwe nke Internet portal Breitbart.com, na-eburu ọnọdụ nke isi ndụmọdụ president (okenye ndụmọdụ).
N'oge na-adịghị anya mgbe mmeri ahụ malitere na nhoputa ndi ochichi, 14. November 2016, mkparịta ụka ekwentị mbụ ya n'etiti ya na President Russia bụ Vladimir Putin mere. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụọ ahụ ekwela nkwa ịrụkọ ọrụ ọnụ. Putin nyere Okpukpo nkwekorita, na-eche na nkwanye ndi mmadu na ndi na-egbochi ndi mmadu na ihe ndi ozo. Ha abụọ kwetara na mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ adịghị afọ ojuju. Dị ka Kremlin si kwuo, akụkụ abụọ ahụ aghaghị "ịlaghachi na nkwado pragmatic maka enyemaka ọ bụla, na-eburu n'uche ọdịmma nke mba abụọ na nchedo na nkwụsi ike n'ụwa." Karịsịa, a ghaghị ime mgbalị n'etiti mba abụọ ahụ iji lụsoo iyi ọha egwu na extremism. Òtù ndị òtù Trump kwuru na onyeisi oche a họpụtara ahọpụta gwara Putin okwu n'ọtụtụ isiokwu. Ebumnuche ndị na-agba ọsọ "mmekọrịta dị ike na nke na-adịgide adịgide na Russia".
China gbara akwụkwọ megidere oku na oku na-akpọ Taiwan Cai Jing-wen nke 2. December 2016, nke ahụ bụ nke mbụ ukara kọntaktị n'etiti American na Taiwanese ndú agbaji diplomatic mmekọahụ n'etiti ndị United States na Republic of China (Taiwan) na 1979, mgbe ama n'okpuru President Richard Nixon ada itie ke 1972 oké turnaround na US iwu n'ebe China . The Obama ochichi si omume a oku na-aga na United States na-aga n'ihu na-akwado onye na-China iwu na tụlee Republic of China na Taiwan agwaetiti n'ógbè Chile China.Akwụkwọ edemedeNew York TimeskaGuardianakpọ oku oku na-akpọ "mkpasu iwe" n'ebe ndịda China, ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị America na-akatọkwa ụda.Opi zara ndị na-akatọ na twitter: "Ọ bụ na-akpali na United States na-ere Taiwan na ngwá agha uru ọtụtụ ijeri dollar, ma m na-anabataghị a congratulatory ekwentị oku."
Gọọmenti Donald J. Trump
Minista ndi ozo
Minista nke ego
Minista nke ikpe ziri ezi
Minista nke ime obodo
Minista nke Education
Minista na-ewu Ụlọ
na mmepe obodo
Minista maka Veterans Affairs
Minista maka Nchedo ulo
Onye isi ụlọ ọrụ White House
Onye nnochite anya US na United Nations
N'oge na-adịghị mgbe emeri nhoputa, opi malitere obibi pesonel metụtara ndị chịkọtara ndị ọhụrụ US na ndị ọzọ bi isi ọnọdụ ke ala ngwa. Ụbọchị iri mgbe ntuli aka gasịrị, o kpebilarịrị na ihe atọ dị mkpa. Dika Minista nke ikpe ziri ezi, o choputara onye isi oche nke Alabama Jeff Sessiones ugbu a. Dị ka mba nche ndụmọdụ mgbe ọ na-nominated n'ihi na onyeisi n'ozuzu na bụbu isi nke ndị agha counterintelligence DIA Michael T. Flynn, onye Otú ọ dị, n'oge February 2017 nwere ọrụ a n'ihi na ha gara aga kọntaktị na Russian isi arụkwaghịm. Ọ bụ Lt. HRM McMaster, nke Onye Nnọchiteanya United States ka akwadobeghị. Director nke CIA mgbe na-ewere dị ka onyeisi oche opi ghọrọ ugbu Republican Congressman Mike Pompeo.
Onye oru ohuru ohu maka akwukwo biara Betsy DeVos nke steeti Michigan, onye gafere Senate nani site na olu onye isi oche Mike Pence, 51: 50. Dị ka onye nnochite anya na United Nations, ụda a họpụtara na Gọvanọ Republican Republican South Carolina bụ Nikki Haley, bụ ndị nne na nna ya kwagara India si India.Mkpebi ndị ọzọ na-arụ ọrụ bụ ọkwa nke Steven Munchin dịka odee akwụkwọ ego nke United States, mbụ bụ Goldman Sachs Banking Manager.
Onye ọzọ nke ọchịchị Trump ghọrọ onye lara ezumike nká 66three General James Mattis dịka Minista Nchedo. Ndi 98: 2 bu votu na Senis. N'ime afọ 44 nke ọrụ agha US, Mattis na-arụ ọrụ nke ukwuu na ndị agha na-ahụ maka ụgbọ mmiri, tinyere agha Iraq ma Afghanistan.
Dika Minista ohuru maka ulo oru na ulo oru obodo, ndi agha Afrika na America na onye ozo na-akwado ndi isi oche nke president maka President Ben Carson, onye oru ogwu ndi ozo.
Nke nta nke nta, aha ndị ọzọ so n'òtù ọzọ nke Trump mara ọkwa. A na-agụnye, n'etiti ndị ọzọ.: Wilbur Ross, na financier 78letý ka Trade Minister, Andrew Puzder ka Minister nke Labor, nke Otú ọ dị, agaghị Sineti, Elaine Chao, nwunye nke akpa Senator McConnell Mitsche maka post Minister nke Transport (sitere Taiwan) na-arụsi ọrụ ike ruo mgbe na-adịbeghị anya ifịk ifịk Star General John Kelly dịka Minista nke Nchedo Ụlọ.
Otu n'ime ọnọdụ kachasị mkpa na nchịkwa ọhụụ ọhụrụ bụ Ozi Mba Ọzọ. Na 5. December 2016 ekwuola na ọ nwere ike ịghọ Rex Tillerson, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ExxonMobil nnukwu ụlọ ọrụ ugbu a.13. Disemba 2016 kwadoro ka a gwa Tillerson ka ọ bụrụ Minista mba ọzọ.Ngoro Tillerson mechara kwenye site na US Senate mgbe ogologo oge gasịrị.
Ná ngwụsị nke December 2016 họpụtara onye ndụmọdụ ọzọ, bụ onye America billionaire Elon Musk.15. A mara ọkwa December 2016 na Ryan Zinke, bụ onye ugbu a nke Ụlọ Ụlọ Nnọchiteanya maka Montana State, ga-abụ Minista Minista ime obodo.
Opi-mara ọkwa ya n'uche ka a ọhụrụ post nke pụrụ iche trostii maka mba mkparita uka. Ọ na-aghọ 49letý general ndụmọdụ Trumpových Companies Jason Greenblatt, onye bụ ndị Juu, dị ka Devid Friedman, ọdịnihu nochiteburu anya Israel. Nhọpụta ndị a dabara n'ime kwusara bukwanu mma nke mmekọrịta dị n'etiti Israel na US opi mgbe na-ewere elu etieibuot mgbe ihe ndị a mmekọahụ ke akpatre oge nke Obama ochichi na Kama nke ahụ, ọtụtụ ihe ka njọ.
Otu nke ikpeazụ nomination bụ nhọpụta nke ga-eme n'ọdịnihu director nke 17 US ọgụgụ isi ọrụ, nke nwere a ngụkọta nke ihe 100 000 ọrụ na-enwe ihe karịrị 50 ijeri dollar kwa afọ. Ọ na-otu Dan uwe, mbụ US senator si kwuo nke Indiana na mbụ nnọchiteanya na Berlin. Nzuzu nhoputa ikpeazụ nke 19 mara ọkwa. January 2017, bụ oru nke mbụ Gọvanọ nke Georgia, Sonny Perdue 70letého, Minister nke Agriculture.Otú ọ dị, ndị Omeiwu ga-akwado iwu a.
Iji 20. January 2017, ya bụ, n'ụbọchị nraranye nke onyeisi US President Donald Trump, naanị ndị nnọchiteanya abụọ nke United States kwadoro. James Matis dịka onye odeakwụkwọ na-eche nche (Pentagon Chief) na John Kelly dịka odeakwụkwọ nke Nchebe nke ụlọ.
Ụda ndị ahụ bụ "ọchịchị kasị baa ọgaranya" n'akụkọ ihe mere eme nke United States, ma eleghị anya n'ụwa. E nwere ọtụtụ nde dollar na nchịkwa ahụ, gụnyere ndị omempụ abụọ (ma e wezụga onyeisi oche n'onwe ya), nke bụ Willbura Ross na Betsy DeVos. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche (ike, ego, ezigbo ala) dị ka Minista mba ọzọ Rex Tillerson na onye ọrụ ego bụ Steven Mnuchin.
President nke USA
20. January 2017 bụ ntinye ụda Donald dị ka 45. President nke United States tupu Capitol dị na Washington. Onye na-agbaso ọgba aghara nke ụda, nke na-agba n'ụgbọala site na Capitol ka White House, ihe rụrụ arụ nke agha na usoro ndị ọzọ, na ememme ndị ọzọ.
21. N'ọnwa Jenụwarị, ụda ahụ nyere iwu kachasị mma iji belata ụtụ ego nke metụtara ọgwụgwọ nlekọta ahụike nke Barack Obama n'ihu usoro mmemme Obamacare kpamkpam. Ọ gara nleta ụlọ ọrụ CIA na Langley, Virginia, ma kwado ọrụ ya.
Na 23. N'ọnwa Jenụwarị, ụda ahụ katọrọ Nkwenye Mmekọrịta Transpacific na mbụ.
25. N'ọnwa Jenụwarị, ụda ahụ nyere iwu iji rụọ mgbidi na ókèala ya na Mexico ma malite ịchọta nyocha ndị omempụtara a na-enyo enyo gbasara ntinye aha ndị nhoputa aka na nhoputa ntuli aka na 2016.
Ọbịbịa nke White House na 27 natara nleta mbụ ya nke mba ọzọ. January 2017. Ya na British Prime Minister Theresa May kwadoro mmekọrịta dị ịrịba ama n'etiti mba ha na ogbako ogbako ndị ọzọ.
N'oge na-adịghị anya mgbe ị sonyesịrị onyeisi oche, 31. January 2017, opi nwa akwukwo nominated n'ihi na itoolu ebe na US Ụlọikpe Kasị Elu, nke vacated 16. February 2016 site n'onwu Onyeikpe Antonina Scalia. N'ihi nke a dị mkpa na ọnọdụ a họọrọ 49letý mgbanwe ọkàiwu Neil Gorsuch, na-arụ ọrụ kemgbe 2006 na onye nke 13 gọọmenti etiti eru ikpe, nke bụ nke abụọ kasị elu atụ nke American ikpe ziri ezi. Ya nomination nwere na-mma site US Sineti, nke bụ na-eguzogide n'ihi na ọtụtụ ndị Democratic kwụsị ibido eleghi anya.Gorsuch, Otú ọ dị, bụ 7. April 2017 kwadoro site na US Senate site na votu 55: 45. Na 10. April 2017 na-aṅụ iyi ma mesịa soro Onyeikpe Kasị Elu nke United States maka ndụ.
2. February 2017 biri opi ekwentị mkparịta ụka na Australian Prime Minister Malcolm Turnbull site iwu na-akwadoghị aka ọmụma ibe-agbawa mgbe abụọ statesmen kwetara na n'ihu nke nkwekọrịta na ngafe nke banyere 1250 mgbapu achọ si Australian njide n'ogige n'àgwàetiti nke Nauru na Papua New Guinea site Australia United States kwubiri n'ọchịchị nke President Barack Obama.
Na nzaghachi na ule nyocha nke nyocha 29 Iran Ballistic. 2017, 3, kpebiri 2 na Donald Trump. Febụwarị nke afọ ahụ iji weta iwu ụfọdụ n'obodo ahụ. Ndi ochichi nke Iranian amaala iwu ndi ozo dika iwu na-akwadoghi, ma kwukwara na ya ga-ewebata nchikota iwu n'ime nzaghachi nye ndi mmadu US na ndi ozo n'enye aka "ndi otu ndi otu a na-eyi egwu". Ụda nwere XNUMX. Febụwarị na Twitter kwuru na gọọmentị ndị Iran natara ikike maka ịchọta ule agha site n'aka US.
4. Na February, ọkàikpe gọọmenti etiti na Seattle kwụsịrị nkwado nke isi oche President Trump, nke gbochiri ụmụ amaala mba asaa ndị Alakụba ịbanye n'ókèala US ma kpatara nsogbu na ọdụ ụgbọelu. N'ikpeazụ, ndị ọkàikpe ikpe ikpe ikpe San Francisco na-akwado ikpe ikpe a. Mgbe ọtụtụ ụbọchị ejighị n'aka banyere usoro ọzọ, a mara ọkwa na nchịkwa nke Trump agaghị eweta ikpe a n'Ụlọikpe Kasị Elu nke United States maka mkpebi ikpeazụ. Ndị nlekọta ahụ na-atụ anya ka ụlọikpe gọọmentị etiti dị na Seattle ga-enwe ike na nha anya nha maka ọnụ na-emegide (anọ na anọ).
Na 4 Saturday. February 2017 kwukwara ụda site na telifon na President Russia bụ Vladimir Putin. Enweghi ike ighota ihe omuma a. N'ụbọchị ahụ, ụda a kpọrọ onyeisi ala Germany Angela Merkel.
11. Ogbugba kwuru na ya azaghị ikpe ikpe gọọmenti etiti ma kwenye na mbipụta ọhụụ nke iwu ọhụrụ ga-eme ka ụmụ amaala nke mba Alakụba machibidoro ịbanye n'ókèala US.
15. Na February, ụda nwetara White House nke Israel Prime Minista Benjamin Netanyahu. N'oge nzuko a, President Trump kwughachiri nkwenye ya na mbufe ulo oru US nke di na Tel Aviv rue Jerusalem. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, Israel akpọwo "ntakịrị azụ" na iwu nke obodo ndị Juu n'ókèala nke Palestian Authority. Ọ na-atụ aro na ya nwere ike ịnakwere ngwọta "otu ala" na ngwọta "ala abụọ" n'Izrel ma nwee mpaghara Palestian.
Ọzọkwa 15. Ndị ọkàiwu na-ahụ maka ikpe ziri ezi na ikpe ziri ezi mara ọkwa na a ga-ahazi onye isi oche ọhụrụ site n'aka Onyeisi oche, kwusi iwu mbụ ahụ, na-egbochi ịbanye n'ókèala United States na ụmụ amaala obodo asaa ndị Alakụba. N'otu oge ahụ, iwu ahụ, nke ụlọ ikpe gọọmenti etopụrụ, ga-eji dochie anya "ederede dị ntakịrị okwu" nke a gbadoro maka "mkpebi ikpe ndị a na-ezighị ezi nke ụlọ ikpe".
25. Opi February jụ ya na-ekere òkè kwa afọ gala nri abalị nke correspondents nyere ikike ịbụ na White House na e nwere ẹkenịmde 29. 2017 April, na-adịrị ọjọọ media megide ya na ya atumatu. Correspondents Association onyeisi oche Jeff Mason mbụ mara ọkwa na n'oge a na nri abalị, a ga-eme ememe, "ọrụ nke onwe ha ozi ọma media na a ike Republic." Mgbe opi renunciation nke na-ekere òkè Association of correspondents ka opi na mkpebi sharply jụrụ.
Na 28. Maka February 2017, ụda onyeisi oche batara na nke mbụ n'ihu ụlọ abụọ nke Congress Congress. O kwuru okwu na-akọwa nsogbu ndị United States na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya chere. Ọ kpọrọ Republicans na Democrats ka ha rụọ ọrụ ọnụ iji dozie nsogbu obodo ahụ. O kwughachiri n'ebumnuche ya iji gbaa ume ka e mepụta ọtụtụ ọrụ ọhụrụ na iji meziwanye akụrụngwa na United States, nke ọtụtụ n'ọtụtụ ebe adịghị mma. O siri ọnwụ na ọ dị mkpa iji iwu nlezianya maka mbata na nke a kwadoro atụmatụ iji wuo akụkụ ọzọ nke mgbidi na ókèala ya na Mexico. Ọ kọsara mgbanwe ụtụ isi, ma enyebeghị nkọwa ọ bụla. N'ihe gbasara mmefu nchebe, ego a na-emefu kwa afọ nke 54 ijeri dollar ga-abawanye.
Na 4. March 2017 abatalarị ọdịiche dị n'etiti President Donald Trumpe na onye bu ya ụzọ, Barack Obama, nke akụkụ ọhụrụ. Ụda ebubo ebubo Obama, na otu n'ime ozi Twitter ya, nke ikwe ka ekwentị ya na-agbanye oge ma ọ bụ mgbe ọ nụsịrị ntuli aka. Otú ọ dị, o tinyeghị ihe ọ bụla na-egosi na mbụ. Ụda na-akpọ Obama "onye ọjọọ ma ọ bụ nke na-arịa ọrịa."A na-ewetakwa banyere ịwakpo ọgba aghara na Obama na Lidovky.cz. Tụkwasị na nke a, a kọọrọ na ụda ahụ gụọ ọbịbịa nleta Obama mgbe ọ gara leta onye nnọchiteanya Russia na United States Sergei Kisljak na White House. Ebubo weputara nleta 22 Kisljak n'oge ọchịchị Obama, nke anọ n'ime 2016.A na-agbagha ụda okwu ma ọ bụ ndị òtù ya, mana na 22. March 2017 kwadoro Devin Nunes, onyeisi oche Republican nke Kọmitii Nyocha Ụlọ Ọrụ nke United States. Dị ka ya si kwuo, mgbe ntuli aka ahụ gasịrị, onyeisi oche nọ na ọnwa November na December 2016 na Jenụwarị 2017. Mgbe ahụ, ụda ahụ malitere ọchịchị ya, soro ndị ọrụ ibe ya kwurịta atụmatụ ya, ma kpọọ ndị isi mba ọzọ. Nunes, dị ka Nunes, nwere ike ịbụ iwu, ma Nunees nwere nchegbu na aha ndị òtù Trump kwuru kpọmkwem na ozi nzuzo ọrụ nzuzo, nke ga-abụ iwu.
Na 17. 2017 gara onyeisi ala Germany bụ Angela Merkel, onyeisi oche nke ụda na White House, na ọtụtụ ndị agha. Nke mbụ, ndị isi obodo abụọ ahụ nọ n'etiti anya anọ na Office Oval na mgbe ahụ, na nnukwu ìgwè nke ndị so na ya, ọkachasị maka mmekọrịta azụmahịa. A na-enwe nzukọ ogbako, nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị nnọchiteanya mgbasa ozi na-abịa site na gburugburu ụwa.N'echi ya, Trump, na Twitter, bipụtara ihe odide ndị a: "Germany ji ego buru ibu nye NATO, United States aghaghị ịkwụ ụgwọ maka nchebe siri ike ma dị oké ọnụ ahịa ọ na-enye Germany!"
Onyinye Donald dị ka mmegwara maka mmegide ndị agha na Syria, bụ ndị gburu ọtụtụ mmadụ na ụmụaka, zitere 7. April 2017 na steeti nke Bashar Asad 59 missiles.Ọ kọrọ ozugbo na ọ bụ onyeisi ndị China ahụ, bụ onye a na-akwado na Mar-a-Lago na Florida.
Na 5. July 2017 ụda biara na Poland. Njem ya na Europe jikọtara na-ekere òkè nzukọ nke ìgwè ihe ndị kasị mkpa mba na ụwa G20 na Hamburg, Germany si 7. ka 8. July. Esokwa ya, n'etiti ndị ọzọ. Melanie opi nwunye ya na nwa Ivanka opi. Na Warsaw, o zutere na ndị nnọchiteanya nke 12 mba Europe nke Central na Eastern Europe na sonyeere na "ụzọ nke atọ n'oké osimiri" (Baltic, Adriatic na Black Sea). Nzukọ mbụ nke otu a mere na 2016 na Croatia. N'echi ya bụ ụtụtụ nke nzukọ na President Poland bụ Andrzej Duda. N'ehihie opi kwuru n'iru nzukọ Polish isi na ndị bi na isi obodo na ncheta nke Warsaw nsogbu alụso na 1944, nke e bloodily ewute site German Wehrmacht. Ụda ahụ nwere nnukwu ekele maka heroism nke okporo osisi na ogologo oge mgba maka nnwere onwe. O sonyeere ndokwa nke Nkeji edemede 5 nkwekọrịta maka NATO, nke na-akwado reciprocity mmekorita òtù iji chebe onwe ha megide mpụga agha. Marginally ọ gwara Russia ịkwụsị "kwụsị iguzosi ọnọdụ". Obere oge ya okwu, opi rutere na ya entourage na Hamburg.
Na G20 Summit na Hamburg, Trump zutere maka oge mbụ ya na President Russia bụ Vladimir Putin.
Na 1. August 2017 kwadoro United States Senate Christopher Ray dị ka onye nchịkwa ọhụrụ nke Ụlọọrụ Federal Bureau of Investigation (FBI) na-esote arịrịọ James Comey. Ọ ghọọ ụdị elu 92: 5, nke pụtara na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị isi gọọmenti Democratic nọ na-akwado nhọpụta nke President Trump.
Otu onye omekota Republican Senator Tom Cotton na David Perdu gbara aro, nke ga-ebelata mpụga iwu na United States. Ọnụ ọgụgụ ndị ọhụrụ kaadị kaadị, ebe obibi na ikike ọrụ, ga-ada site n'ihe dị ka ọkara nde na ọkara nde mmadụ kwa afọ. Ndi ochichi nke ochichi choro igbochi nke a n'ihi na o ga-emebi ndi si mba ndi na-abụghị mba Europe,bụ onye kemgbe iwu nke Immigrashọn na Nationality Act nke 1965 nọ n'etiti ndị na-akwaga iwu na United States.
Arụmụka na nkatọ
Mmekọahụ na ụmụ nwanyị
N'oge mgbasa ozi ya, Donald Trump katọrọ ọtụtụ ugboro n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị gbasara ụmụ nwanyị. Na Howard Stern's "The Howard Stern Show" na 2005, 1 kwuru ụmụ nwanyị na 10 ka XNUMX ogo.Ya kwuru abụghị naanị nkịtị, ma na-na-atụ aka a akpan akpan nwaanyị. Na 1996 ọ na-akpọ na mbụ Miss Universe Alicia Machado "Miss Piggy" (Miss Piggy), nakwa "na-eri igwe" (a igwe-eribiga nri ókè) na "Miss ilekọta" (Miss ihicha). Donald opi dị iche iche n'oge okwu ọjọọ wakpoo American omee Rosie O'Donnell, na ọbụna n'oge arụmụka nke Republican Party na 2015.
Otu afọ mgbe e mesịrị na 2016, n'oge agha maka ọkwa onyeisi oche ahụ, Washington Post bipụtara vidiyo 2005.Video-amalite na ihe oncoming ụgbọ ala widths metụtara na a soundtrack Donald opi N'ajụjụ ọnụ mbụ TV A Billy Bush n'ime ụgbọ ala na-aga n'ihu na ajụjụ ọnụ opi, Bush na omee Arianne Zucker studio NBC Universal. Na N'ajụjụ ọnụ opi inappropriately o kwupụtara banyere ụmụ nwaanyị na-ekwu banyere mmekọahụ wakpo nke ọ rịọrọ ikpe. Donald opi amaghị na a okwu na ya na ihe ọmụma enịm na ya, bụ ugbua n'ọrụ. Kpọmkwem, o kwuru okwu banyere groping nke nwanyi, nke o mere, nakwa na ọ na-gafere n'ihi na ọ bụ ma ama. N'ihi na okwu ndị a na-afu opi mgbaghara mgbe ha n'akwụkwọ; n'oge ahụ, ma ebe ọ bụ na-ekpe ọtụtụ nke na-akwado ya.N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị inyom kwadoro okwu nke aka ya, na-azọrọ na ọ bụ ha bụ ụda okwu banyere ndekọ. Otu n'ime ndị inyom bụ Natasha Stoynoff si na magazin ahụndị mmadụ, nkwupụta ya mesịrị kwenye site na isii nke ndị ọrụ ibe ya.E nwere ihe ndekọ dị egwu nke ụda okwu banyere ụmụ nwanyị. Dịka ọmụmaatụ, na 1997, o kwuru na dị ka onye nchịkwa nke asọmpi "Miss Teen USA", ọ nwere ike ịgakwuru uwe ụmụ nwanyị ma hụ ha gba ọtọ. Ọ na-agwa ụmụ agbọghọ ahụ mgbe nile na nke a bụ nnyocha. Ọtụtụ ndị na-asọ asọ na mbụ ekwupụtawo na nkwupụta a bụ eziokwu.
1: Ọkụ Elu Ụwa
3: Ụlọ elu ahụ
4: Ụda: Art nke arụ
11: Nnọchiteanya NNPCX nke President US
12: Mmekọrịta Transpacific
18: nwa akwukwo onye isi
19: Kọmitii Reform nke United States nke America
21: Gbaghaa Priebus
27: Mwakpo na Charlottesville
28: Mbara Igwe
31: Nyocha nke Politization
36: Mmiri atọ nke atọ
39: Ụlọ White
40: Referendum na United Kingdom na European Union 2016
47: Tiffany ụda
48: Ụda Melania
Donald John Trump (* 14 June 1946 New York) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị American Republican na 45. President nke United States nke America, bụ onye ghọrọ 20. January 2017. O sonyeere White House n'oge ọ bụ 70 dị ka onye kasị bụrụ okenye na onye ọgaranya a họpụtara ahọpụta ma bụrụ onye mbụ na-arụ ọrụ na-enweghị ahụmahụ ọhụụ nke ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị agha.
Trump World Tower bụ ụlọ elu na-elekọta ụlọ na 845 United Nations Plaza na Manhattan, New York, n'okporo ụzọ mbụ n'etiti 47 na 48 Street. Ewuwu ahụ malitere na 1999 ma wuchaa ụlọ na 2001. Onye omenala Polish bu Marta Rudzka nke Costas Kondylis & Partners LLP Architects. Ụlọ elu nke ụlọ ahụ bụ 262 mita na Trump World Tower nwere ụlọ 72 nke na-agba ọchịchịrị.
Ụlọ nke Trump Tower bụ ụlọ elu na New York na-eguzo na Fifth Avenue NỌ 725, na nkuku nke 56. n'okporo ámá. Ụlọ ọrụ ahụ rụrụ site na onye na-emepụta ụkpụrụ Derem Scutt (Swanke, Hayden Connell) na-efu ego maka onye na-enye Donald Trump. Emechara na 1983, ụlọ ahụ nwere ụlọ 58 na elu ya bụ 202 mita.
Opi Tower na opi ụlọ nche bụ aha ọtụtụ skyscrapers, nke nwere na-achị Donald opi: opi ụlọ nche IstanbulTrump ụlọ nche AtlantaTrump Charlotte - e ụlọ elu dị na ogbe ndịda CharlotteTrump Tower (Baku) opi Tower (Manila) opi Tower (New York) opi Tower (Philadelphia) opi Tower (Tampa) opi Tower (White n'Ọzara) opi International Hotel na Tower (Chicago) - dechara na 2009Trump World Tower - New York CityTrump ụlọ nche site Sea - ka FloriděTrump Parc na Stamford, Connecticut
Ụda: Art nke Deal bụ akwụkwọ sitere n'aka 1987 weere dị ka ihe ndekọ na dịka akwukwo gbasara mmepe onwe onye. Ndị edemede gụnyere Donald Trump na odeakụkọ bụ Tony Schwartz ndị na-arụ ọrụ kemgbe 1985. Akwụkwọ ahụ ruru 1. New York Times depụtara ndepụta nke akwụkwọ kacha mma ere akwụkwọ ebe 51 anọwo ruo izu. Ọ bụ akwụkwọ mbụ e bipụtara ma nyere ya aka ịmara aha ya na ezinụlọ ọ bụla. Olu na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma ọ rụpụtara na akwukwo ya kachasị amasị ya na Bible.
Eric Frederick Trump (* 6 January 1984 New York) bụ onye ọchụnta ego America na nwa nke onyeisi US President Donald Trump na nwunye mbụ ya, Ivana Trump. Na 2007, o hiwere 2016 wee mee Eric Trump Foundation (Eric Trump Foundation). Ọ bụ onye isi oche nke Òtù Na-ahụ Maka Ụda.
Marla Maplesová (* 27. 1963 October Dalton) bụ American omee na mbụ na nwunye nke US President Donald Trumpa.Životopis mụrụ dị ka nwa-nwayi a ezigbo ala na ụlọ gị n'ụlọnga Edward Stanley Maples na ụdị Laura Ann Locklear. Ọ na-amụ na Northwest Whitfield High School na Tunnel Hill. 1983 meriri aha Miss Georgie. Na 1986, ọ kwụrụ dị ka onye na-eme ihe nkiri na obere ọrụ na Machine Rise.
Mike Pence (* 7 June 1959) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị American Republican na 48. Onye isi oche nke United States. Site na 2013 ruo 2017, ọ bụ Gọvanọ nke Indiana. Na mbụ, 2001 ka 2013 bụ otu n'ime ndị nnọchianya si na steeti a na Ụlọ Ndị Nnọchiteanya.
Covfefe bu okwu nke onye isi ala US President Donald Trump jiri mee ihe na 31 ya. Mee 2017. All tweet bụ na Bekee: "N'agbanyeghị na mgbe niile na-adịghị mma pịa covfefe" (n'agbanyeghị na mgbe ọjọọ pịa covfefe). O doro anya na ejighị aha aha nke tweet nke e dekọrọ na akaụntụ Trump pụtara n'etiti abalị nke oge Washington na ehichapụchara ihe dị ka awa isii. Ka ọ dị ugbu a, ọ ghọrọ otu n'ime tweets kasị ewu ewu na 2017 mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu ọchị na ịkọwa ihe ọ pụtara.
Jared Kushner (* 10 January 1981, Livingston, USA) bụ onye ọchụnta ego America na ụlọ ahịa. Ọ bụ onye nchịkọta akụkọ nke New York Observer. Nwunye ya bụ Ivanka Trump, ada nke onyeisi US President Donald Trump. Tinyere ndị ikwu ndị ọzọ, Kushner ghọrọ onye so na ndị Trumpa maka ike. O nyeere aka na mkpọsa ntuli aka ahụ iji nwee nzukọ ndị dị mkpa, nakwa dịka onye na-eso okpukpe ndị Juu nke Ọtọdọks, o nyeere ya aka ịchọta ndị Juu na-ekpe ntuli aka. Na 2017, Donald Trump họpụtara ya dị ka onye na-ahụ maka ndị na-elekọta ụlọ maka Ọgwụ na Middle East.
Mike Richard Pompeo (* 30 December 1963, Orange, United States) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Republican nke United States. N'afọ 2011 ruo 2016, ọ bụ onye òtù nke Ụlọ Ndị Nnọchiteanya maka steeti Kansas. Ọ bụ onye nkwado nke Republican Conservative Tea Party.
Onye nhoputa ndi ochichi US na 2016 mere na Tuesday, 8. November 2016, dika 58. nhoputa ndi ochichi nke United States. Ụmụ amaala tozuru oke site n'aka ndị nhoputa aka ha ịhọrọ ndị mmeri, bụ ndị ahụ họpụtara dị ka otu ndị na-ahọpụta ndị omekorị n'usoro nke 45. President na 48. Onye isi oche nke United States.
Transpacific mmekorita (English Trans-Pacific Partnership, ma ọ bụ TPP English Trans Pacific Partnership Agreement, TPPA) bụ a Multilateral nkwekọrịta na ahia mpaghara n'etiti Member States, bụ nke e negotiated mgbe ọtụtụ afọ nke mkparita uka na US Obama nchịkwa ke 2015 na bịanyere aka na April n'afọ ọzọ. Ime nkwekọrịta metụtara Japan, Brunei, Malaysia, Vietnam, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru na United States. The nkwekọrịta a na-iji ihe atụ, site na mbenata ahịa na-akwalite uto na ime ka aku mmekọahụ, ma na-ịme ka edo ọrụ ụkpụrụ. Donald Pump aka 23. Nchịkọta 2017 January January ka ị hapụ ọrụ ahụ. Ọ kwadobeghị Congress n'oge ahụ.
"Snake" bụ abụ nke onye egwú America bụ Oscar Brown dere na 1963. Onye na-abụ 1968 bụ Al Wilson ama ama ya. Singl, onye B-n'akụkụ bụ abụ "Willoughby Brook," enweghị nnukwu ihe ịga nke ọma na United States, kama ọ dara na United Kingdom. Na September 1975 rigoro 41. Edere Singles UK. Onye oru ego Donald Trump na-agụ ihe ederede nke abụ a dịka akụkụ nke ọkwá onyeisi oche ya iji kọwaa echiche ya banyere nsogbu ndị gbara ọsọ ndụ na agbagha nke Agha Obodo na Syria.
Frederick Christ Trump Sr. (11 October 1905 - 25 June 1999, nke a makwaara dị ka Fred Trump) bụ onye na-emepụta ihe na America na-arụ ọrụ kachasị na New York City. Ọ bụ nna 45. Onye isi mba United States bụ Donald Trump.
40 Wall Street bụ adreesị dị na Niu Yọk, nke na-akọwa ihe nhazi nke na-arụ ọrụ dịka isi ụlọ ọrụ nke Bank of Manhattan Company mgbe ọ rụchara. Ka oge na-aga, a bịara mara ya n'aha ahụ. Mgbe onye ọrụ mbụ ya jikọtara ọnụ na Chase National Bank, e hiwere Chase Manhattan Bank. Taa, a na-akpọ skyscraper dị ka Ụlọ Ọgba Mmiri, mgbe e wuchara 1996, nke onye nwe ọhụrụ nyere - Donald Trump. Na 1998, e depụtara ya dị ka otu n'ime ebe nkiri obodo. Ọ bụ ugbu a bụ ụlọ nke isii kasị elu na New York.
Twitter bụ netwọk mmekọrịta na microblog ọrụ nke na-enye ndị ọrụ ikike iziga ma gụọ posts ndị ọrụ ndị ọzọ zigara, ndị a maara dịka tweets. Nsụgharị nke "twitter" bụ "twittering", "twittering", "twittering".
Jefferson Beauregard Sessions III (24 December 1946) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọkàiwu America. Na February, a họpụtara 2017 onye ụkọchukwu na-ahụ maka ikpe ziri ezi na United States na ọchịchị Donald Trump. N'afọ 1997 ruo 2017, ọ bụ Senator nke United States Congress for Alabama. Ọ bụ onye so na Republican Party. Site na 1981 gaa na 1993, ọ bụkwa onye ọka iwu nke United States maka Southern District nke Alabama. Na 1986, a họpụtara ya n'enweghị ihe ịga nke ọma n'otu mpaghara maka otu ọkàikpe ikpe ụlọikpe. E choputara 1994 site na Minista Alabama na-ekpe ikpe ziri ezi, 1994 ka a họpụtara dị ka onye nnọchiteanya United States, weghachitekwara ya na 2002, 2008, na 2014. N'oge ọ nọ na Congress, a na-ewere nnọkọ ndị a dị ka otu n'ime ndị na-anaghị agbanwe agbanwe nke American Senate.
Onye na-akwado maka onyeisi oche nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye kpebiri itinye akwụkwọ maka onyeisi oche, mezuru ọnọdụ iwu ma mee ihe ndị a chọrọ. N'okwu dị nkenke, a na-ewere onye nomine a ịbụ onye isi oche nke steeti dịka onye nchịkọta president. Ntughari aka, ndebanye aha, na-achịkarị iwu, gụnyere ọnọdụ nke ịhọrọ.
Òtù Reform Party nke United States nke America bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-arụ ọrụ n'ókèala United States of America. Ọ bụ 1995 kpatara ya site n'aka Ross Perot, bụ onye kwuru na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị America nwere ike ịgbagha ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ya mere, ọ dị mkpa maka mgbanwe dị mkpa.
Andrew G. McCabe nakwa Andy (* 1968) bụ onye nduzi oge nke FBI. Ọ bụ onye nchịkwa na-adịru nwa oge nke 9. May 2017 họpụtara onye isi US Donald Trump. Ọ na-arụ ọrụ maka 2. August 2017, mgbe a na-aṅụ iyi New Director, Christopher A. Wray na ya, ọ "laghachi" dịka onye isi nchịkwa FBI.
Reinhold Reince Priebus (* 18. 1972 March Dover, New Jersey) bụ American onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eje ozi si January ka July 2017 2017 dị ka onye nduzi nke White House (Chief nke mkpara) na ochichi nke President Donald opi. Na 28. July 2017 bụ nke a mma, na president asuan na-anọchi ugbu a Secretary n'ala nna Nche (na mbụ Marine Corps General) John Kelly. N'agbata 2011-2017 Priebus jere ozi dị ka onyeisi oche nke Republican National Committee (Republican National Committee, RNC) n'ezie a na ndutịm isi nke Republican Party.
Ụlọ elu na Tower nke International Trump International, nke a makwaara dị ka Trump Tower, bụ onye na-eme ihe nkiri na obodo Chicago, Illinois. A na-akpọ ụlọ ahụ mgbe Donald Trump dị iche iche nke America.
Paul Davis Ryan (29 Jan 1970 Janesville) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke America n'azụ Republican Party, na-eje ozi na 29. October 2015 ka 62. Onye isi oche nke Ụlọ Ndị Nnochite anya. 1999 nọ ọdụ maka Wisconsin na Ụlọ nnọchiteanya kemgbe XNUMX.
January - Sunday dịkarịa ala 39 ndị gburu ke wakporo a oriri na nkwari abalị na Turkish obodo Istanbulu.2. January - Monday Ma ọ dịkarịa ala, ndị Nwụrụ Anwụ 60 ekwuola agha agha na mkpọrọ Brazil na Manaus. Polish uwe ojii jidere 28 ndị mmadụ n'oge riots na elk, nke mere ka a na-egbu a Polish nwa okoro a n'ọgụ na Tunisian ọrụ kebabu.3 echekwa. January - Tuesday Brexit: Ivan Rogers, onye nnọchiteanya Britain nọ na European Union, kwụsịrị ịga ụlọ ọrụ. Megyn Kelly, onye na-akọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Fox News, kwuru ọkwa ya ịkwaga na NBC.5. January - Thursday mesentery, nke e mbụ na-atụle akụkụ nke peritoneum, e kwuru okwu ya na akwụkwọ ahụ dị ka a ọhụrụ ngwa nke ahụ mmadụ. Hamza biini Laden, nwa Osama biini Laden, na US State Department esịne ke "ndepụta nke zuru ụwa ọnụ-eyi ọha egwu" .6. January - Friday dịkarịa ala 33 ndị gburu ke a n'ụlọ mkpọrọ ogbaaghara ke Brazil obodo nke Boa Vista na steeti Roraima. Ndị agha agha nke Côte d'Ivoire nupụrụ isi n'obodo ndị dị na Bouaké, Daloa na Korhogo. Dịkarịa ala ise ndị gburu ke agha Esteban Santiago-Ruiz ọkara akpaka ngwá agha n'ọdụ ụgbọelu dị na Fort Lauderdale-Hollywood Floridě.7. January - Satọdee Okpukpo 40 kachasị gbuo mmadụ na igbu onwe ya na obodo Siria nke Azaz nke dị na Turkey. Mgbe ọ dị afọ 92, onye isi Portuguese na Prime Minista Mário Soares bụ 8 nwụrụ. January - Sunday Na Jerusalem, e nwere otu mwakpo gwongworo nke ụmụ nwanyị atọ nwụrụ ma otu nwoke nwụrụ. Ndị ọzọ merụrụ ahụ.9. January - Monday Mgbe ọ dị afọ 91, Zygmunt Bauman bụ ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze bụ onye Juu nwụrụ (dị ka onyinyo). E nyere egwu egwu La La na 74 Best Award Award. Golden Globe award year. Na Northern Ireland ọchịchị dara mgbe na-anọchi anya First Minister Martin McGuinness (Sinn Féin) arụkwaghịm ya funkci.10. January Tuesday - na Poland ụzọ bịara puku US agha na Ntụle ọwụwa anyanwụ iyi tojubigara ókè nke NATO na Operation Atlantic Kpebisikwuo (Atlantic mkpebi siri ike). Nke a bụ azịza nke njikọ ndị Russia nke Crimea na agha na East nke Ukraine.
Christopher Asher Wray (* 17 December 1966) bụ onye nduzi nke FBI. N'ime afọ 2003 ruo 2005, ọ na - arụ ọrụ dị ka Deputy Attorney General na onye na - elekọta ndị omempụ n'okpuru ọchịchị George W. Bush. Site na 2005 ruo 2017, ọ bụ onye ya na Eze & Spalding. 7. June 2017 President Donald Trump kwupụtara ọkwa ya ịhọpụta Wraye ka ọ bụrụ onye isi nke FBI. . Ndi 1 Senate kwadoro ya. August 2017 na 92 - 5., Iyi nke 2 mere. August 2017.
James N. Mattis (* 8 September 1950, Pullman, USA) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye isi US General Corps General. Ọ nọwo na-achị ndị agha US n'oge Iraq na Afghanistan. Kemgbe January, 2017 na-edebe akwụkwọ nke odeakwụkwọ US Nchedo na nchịkwa Donald Trump.
Na 12. Na August, ụgbọ ala na Charlottesville, Virginia wakporo 2017. 20 nwa okorobịa ahụ na-anya ụgbọ ala n'ime ìgwè ndị mmegide. A na-ebo ya ebubo na ọtụtụ mmejọ, tinyere ọnụọgụ nke abụọ. Media banyere ihe omume a kwuru dị ka onye na-amaghị ihe ma ọ bụ ndị na-eyi ọha egwu.
Mgbaigwe efu bụ asọmpi mara mma nke mba ụwa na-eme kwa afọ kemgbe 1952. Ọ na-asọ asọ na World Miss World na-asọmpi dịka ọrụ kasị mkpa nke ụdị ya n'ụwa.
Boeing 757 bụ ụgbọelu jet engine jikọtara maka obere oge. Emere Boeing Model 757 mbụ maka oru mbu nke 19. January 1982 si na Renton Airport.
Inishturk (Irish Inis Toirc, nke pụtara "agwaetiti ọhịa") bụ àgwàetiti dị na Mayo na mpaghara Connacht nke Ireland. Ọ bụ 18 bi na agwaetiti ahụ. Ohia nke Inishturk dị na Atlantic Ocean, 14,5 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri nke Ireland. Ókèetiti kacha nso dị nso bụ Caher Island, nke dị n'etiti Inishturk na Clare Island n'ọnụ ụzọ Clew Bay. Nnukwu agwaetiti ọzọ dị na Atlantic Atlantic gburugburu bụ Inishboofin na ndịda ọdịda anyanwụ. Ebe kachasị elu nke Inishturk rutere na 189.3 mita (621.1 kwụsị). N'akuku ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, e nwere ihe dị elu na nkwụ elu nke 100.
Ịchị sayensị bụ ụzọ isi emetụta sayensị maka ihe mgbaru ọsọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọzọ .Ma, ebe ọ bụ na n'oge ochie, a na-eme sayensị n'usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dị ka nkà (nkà na ụzụ). Dịka ọmụmaatụ, Archimedes rụrụ ọrụ maka Eze Hieron ma mepụta ígwè agha ya. Ọbụna Leonardo da Vinci, na mgbakwunye na nkà, rụrụ ọtụtụ usoro agha (rụọ ọrụ maka Medici ma ọ bụ Pope).
Catherine Smržová (* 26. 1980 September na Prague, Czechoslovakia) bụ a Czech nlereanya na nke mbụ na-agba ọsọ na-elu-Czech Republic 2002.Život Na 2002 e gara site Czech mma zoo Miss Czech Republic na enịm dị ka ụzọ na-agba ọsọ-elu. Czech Republic na-anọchi anya Miss Universe na asọmpi mara mma ụwa, nke ikpeazụ bụ 7. December 2002 na London. Ọ gaghị enwe ihe ịga nke ọma. Ọ na-anọchite anya mba anyị na asọmpi mara mma nke ụwa na Miss Universe, nke e mere na 3. June 2003 na Panama. O tinyere ya na 8. ebe. Mgbe o nwesịrị ihe ịga nke ọma na asọmpi Miss Missing Ụwa, ọ gbagara New York. Ọ bụ onye America Billion Donald Trump hụrụ ya ma nye ya ọrụ ya na ụlọ ọrụ ya.
Kevin Stephen "Steve" Bannon (* 27. 1953 November, Norfolk, USA) bụ American na-azụ ahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mara maka ya na àjà ihe ọṅụṅụ-nri echiche, bụ ndị nwere ndị post of enye Ndụmọdụ na de facto isi strategist nke President Donald opi n'etiti January na August 2017.
Allan Lichtman (* 4. 1947 April) bụ American prọfesọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere eme onye na-akụzi na American University dị na Washington, DCJe co algọridim na-akpọ "Iri na atọ eme", nke kemgbe 1984 mgbe niile n'ụzọ ziri ezi, e buru amụma na-arụpụta nke US president voleb.Třináct isi algọridim "Iri na atọ eme "Dabere na ọmụmụ ihe niile US ntuli aka ntuli aka kemgbe 1860. Lichtman kọwara ya na ya akwụkwọ The Iri na atọ eme na Presidency (The Iri na atọ eme na Presidency) na-eme ka White House (The eme na White House). Ya mmepe rụkọrọ ọrụ na ndị Russian mgbakọ na mwepụ, seismologist Vladimir Keilis-Borok (1921-2013), nke mbụ si mesoo ịkọ ala ọma jijiji.
Hotel Plaza (English Plaza Hotel) bụ devatenáctipatrový okomoko hotel dị nso Central Park South na Manhattan, New Yorku.Rozměry na ọnọdụ nke hotel dị elu 76 122 m m ogologo. Ọ bụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Grand Army Plaza, nke e nwetara aha. N'ebe ọwụwa anyanwụ nke Grand Army Plaza, Manhattan Artery 5th Avenue na-agba ọsọ. Ebe 1988 nwere Donald Trump. Ugwu a zitere ụlọ nkwari akụ maka nde dollar 407,5, nke bụ taa [mgbe?] N'ihe dị ka nde dollar 824.
Atọ Atọ nke Atọ bụ nzukọ na-ezighị ezi nke mba iri na abụọ na Central na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ebumnuche ya bụ ịkwado mba dị iche iche ma jikọọ mpaghara ahụ n'ebe ugwu-n'ebe ndịda.
Waterboarding bụ usoro eji eji nkwupụta ma ọ bụ ozi eme ihe. Ọ na-eji n'oge Njụta Okwukwe (14. Century) na taa (2009) na-Amnesty International-atụle ga-a ụdị ịta ahụhụ, mgbe mbụ US Vice President Dick Cheney kpọrọ ya "a bara uru isi iyi nke ọmụma" na McCarthy, director nke ẹsịnde Center na onye bụbu onye ikpe na US , na-ewe echiche na waterboarding nwere ike ghara ịda n'ime definition nke osisi ịta.
James Brien Comey, Jr.. (* 14. 1960 December, Yonkers, New York, USA) bụ a ọkàiwu si United States, mbụ FBI director na mbụ Deputy Minister spravedlnosti.Mládí, agụmakwụkwọ na rodinaNarodil na Yonkers, New York, ma toro Allendale, New Jersey. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Northern Highlands Regional High School na Allendale na gụsịrị akwụkwọ na College of William na Mary na onwu na okpukpe. Ikpeazụ ya tesis nyochara na-emesapụ aka ọkà mmụta okpukpe Reinhold Niebuhr na mgbanwe televangelist Jerry Falwell, na mesiri ike na ha nkịtị okwukwe na ọha na eze ihe. Ebe ọ bụ na 1985 bụ andikama a Juris Doctor ogo gụsịrị iwu ụlọ akwụkwọ na Mahadum Chicago.
Ụlọ White White bụ oche oche na ọrụ nke President nke United States nke America, onye ezinụlọ ya bi na ebe a. Ọ dị na Washington, DC, na 1600 Pennsylvania Avenue NW. A na-ejikarị okwu White House eme ihe ọ bụghị nanị maka iwu onwe ya kamakwa maka nlekọta nke onyeisi oche nke United States. Ụlọ ahụ ka okenye karịa afọ 200, onye isi oche mbụ na White House bụ John Adams, bụ onye isi nke abụọ nke United States. Ụlọ nke White House malitere na 13. October 1792 na ọtụtụ mmegharighachi emeela kemgbe ahụ. Agha British Year-old (nke Agha Agha nke Afọ 1812), Agha Agha nke Abụọ nke Onwe Ya, bụ ebe British White House 24 na-ese na mbụ. 1814 ọkụ na August. Ntụziaka dị mkpa mere na 1961, mgbe Jacqueline Kennedy zụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme na ndị ọhụrụ. Ụlọ ahụ dum jisiri ike idozi n'otu afọ. O mepụtara ihe ngosi nka nke akụkọ ntolite nke Amerika ebe a na nchikota ndi isi oche ndi isi. Ụlọ White na-agụnye ụlọ ọrụ ahụike na eze eze, ụlọ ọrụ TV, ụlọ ọrụ solarium, ọdọ mmiri ime ụlọ na ebe obibi pụọ na bọmbụ nuklia. 2017 bi na 45 kemgbe January. Onye isi US President Donald Trump.
Ntụlegharị referendum na United Kingdom na European Union bụ nchịkọta referendum nke dị na United Kingdom na Gibraltar site na 23. June 2016, nke ụmụ amaala gosipụtara echiche ha banyere ndị nọ na steeti na European Union. Ndị nhoputa ndi ochichi weputara site na nsonye nke 17,411 nke kachasi elu (51,9%) maka onye a na-akpọ Brexit (Bekee "British" na "ọpụpụ", ịpụ na Britain), ya bụ ịhapụ njikọ. Ndị na-emegide ndị òtù Britain na European Union (EU) meriri 308 si na 382. Ndị ntuli aka ahọrọ ịhapụ mgbe afọ 43 nke òtù EU.
Elisabeth Dee "Betsy" DeVos (onye na-enweghị ike ịkọ Betsy DeVos, onye isi ojii, * 8 January 1958) bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị America maka Republican Party, si 7. February 2017 Minista nke Education na Gọọmentị nke Donald ụda. Ọ kwụsịrị John King Jr. site na ochichi nke Barack Obama.
Jerome Hayden Powell (* 4. February 1953, Washington DC) bụ American ọkàiwu na so na Board of Governors nke Federal Reserve System (Board of Governors nke Federal Reserve Board, abbreviated mgbe "nri"), na United States, nke na-eje ozi kemgbe 2012. Na 2. Onye isi oche nke Federal Reserve System dị ka onye nnọchiteanya nke Janet Yellen bụ onye isi ochichi nke 2017 bụ Donald Trump Powell. Ọ bụrụ na Ụlọọrụ United States kwadoro, Powell ga - ewepụ ọrụ ọhụrụ ya na 1. February 2018.
Paul D. Miller bụ American agụmakwụkwọ, CIA nyocha, blogger na mbụ-enye Ndụmọdụ na Oche George W. Bush na Barack Obama na mpaghara nke Afghanistan na Council of National Nche, onye na 2012 ọma buru amụma na Russian aka na Ukraine, nke malitere na 2014. Ọ bụkwa onye isi nchịkwa William P. Clements, Jr. Ụlọ Nche Nchebe Mba na Mahadum Texas, Austin, Politologist RAND Corporation, onye bụbu onye nlekọta ọgụgụ isi nke United States na ndị agha agha na Afghanistan.
Donald John "Don" Ụda Jr. (* 31 December 1977 New York) bụ onye ọchụnta ego America. Ọ bụ ọkpara nke 45. Onye isi US President Donald Trump, na ụdị Czech nke Ivana Trump. Ọ na - arụ ọrụ ugbu a na nwanne ya nwanyị, bụ Ivanka Trump na nwanne ya bụ Eric Trumpe, dị ka onyeisi oche onyeisi oche Trump, nke nna ya wuru.
Marie Ivanka opi (* 30. 1981 October na New York City, New York, United States) bụ American na-azụ ahịa na modelka.Svému nna Donald opi aka ya mkpọsa na president ntuli aka 2016. O mekwara ka otu onye nke 16 Team maka nlekọta nke Trump's Presidium.
Ivana Trumpová, nke a mụrụ Zelníčková, (* 20 February 1949 Zlín) bụ nwanyị azụmahịa nke Czech Czech, onye bụbu onye na-azụ ụgbọ na onye nlereanya. Na 1977-1991 afọ, Donald Trump bụ nwunye mbụ nke onye ọchụnta ego na onye isi oche United States ọzọ.
Ariana Tiffany opi, ọmụmụ aha Ariana Tiffany opi (* 13. 1993 October West Palm Beach, Florida) bụ American Internet celebrity na ada nke president nke United States Donald opi na nke abụọ ya na nwunye, Marly Maplesové.
Melania opi, nepřechýleně opi, ọmụmụ aha Melanija Knavs, germanised: Melania Knauss (* 26. April 1970 Novo Mesto) bụ onye bụbu Slovenian nlereanya, mmebe ọla na ese, nke si January 2017-arụ ọrụ nke mbụ Lady nke United States of America bụ nwunye US President Ụda Donald.
Opi ike pụtara: příjmeníDonald opi (* 1946) - American na-azụ ahịa, omee na onye dere, nna Ivanka 45. President USAIvana opi (* 1949) - American na-azụ ahịa, na nne IvankyDonald opi Jr. (* 1977) - American na-azụ ahịa, nwa Donald na IvanyIvanka opi (* 1981) - American nlereanya na-azụ ahịa, nwa-nwayi Donald na IvanyKelly opi (* 1970) - German pornoherečkaJudd opi (* 1989) - British player snookerujiný významTrump Tower - multiple akpọkwa ( hotels, skyscrapers)